Chin National Day – Page2– Chin Community in Norway
February 20, 2015 ccn CCN News, Chin National Day, Statements/Letters
English Today marks the 67th anniversary of Chin National Day observed every year by Chins around the globe to commemorateaunited and collective decision of our forefathers to relinquish class-conscious feudalism and espouse democratic system based on freedom, equality and the desire of the majority public. Under the leadership of CCN, Chins living in…
February 20, 2015 ccn CCN News, Chin National Day
January 13, 2015 ccn CCN News, Chin National Day
Dear Norway khuasa Chinmi vialte, Nan dam cio hna maw? Kum hlun 2014 chung vialte damnakakan pe I, kum thar 2015 zong dam tein kan phanh tertu kan biakmi Pathianamin thangtthat si ko seh! Nan theih cio bang, kumthar nihakan phorhmi cu tuah/ttuan ding thar tete an si. A…
February 21, 2014 ccn Chin National Day, Statements/Letters
( ၆၆ ) နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်။ ရက်စွဲ။ ၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၄ ယနေ့ ၆၆ နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ သည် ဘုိုးဘွားများက ခုိုင်မာသည့် စိတ်ပုိုင်းဖြတ်မှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ နှင့် ကုိုယ့်ကြမ္မာကုိုယ်ဖန်တီးရေး ကုိုရွေး ချယ်ခဲ့ကြသည့် နေ့ထူးနေ့မြတ် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကြောင့် နော်ဝေးရောက် ချင်းအမျိုးသား များအဖွဲ့အစည်း CCN ကလည်း ဘုိုးဘွားများက ချမှတ်ခဲ့ပြီး ပြည်သူတရပ်လုံးနှင့် လက်တွဲ၍ အမျိုးသားရည်ရွယ်ချက်ပန်းတုိုင်ကုို အကောင်အထည် ဖေါ်နိုင်ရန် ကြိုးစား ပါဝင်သွားရန် အသစ်တဖန် ကတိပြုအပ်ပါသည်။ ချင်းအမျိုးသားနေ့သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအစုိုးရ တို့ ဆွေးနွေးသဘောတူညီမှုအချို့ လက်မှတ်ထုိုးသည့် အချိန်အထိ မြန်မာပြည်တွင်…
December 4, 2013 ccn CCN News, Chin National Day
Chin National Day 2014 cuanai chin lengmang cang. CND tuah cu CCN zong nih ai hmaithlakmi le upatnak peek dingin ai timhmi asi caah 2014 zong tuah kho tthan dingin timhtuahnak ngeih asi. Upa minung7kai in meeting tlamtling ngaiin kan tuah khawh. 2013 kan tuahnak hmun asimi, Stavanger ah i tuah…
Invitasjon til 71. Chin Nasjonaldagsfeiring i Norge February 13, 2018